Nhau - Makorokoto pakubudirira kweTHUAN AN PAPER PROJECT
Makorokoto pakubudirira kweTHUAN AN PAPER PROJECT iyo yakatanga muna 2018. Iyi purojekiti muchina uchangobva kuvakwa wemuchina wemapepa we5400 / 800 uine matatu ply muVietnam. Zvese zvemuchina zvekudonhedza zvinhu zvinogadzirwa neShandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co. ltd. (SICER). Mushure mekuisirwag uye kuiswa muna Gumiguru 2018, muchina wepepa wakaiswa mukubudirira. Mushure mekumhanya kwegore rimwe chete, takagamuchira kuongororwa kwakanaka kubva kumutengi wedu. Iyo yekumhanyisa yekushanda yasvika kune yakagadzirirwa dhizaini uye rinouya bepa rinoitwa kuti rigutsikane mhando. Pazuva ratakashanyira kumagayo emapepa, kumhanya kwekushanda kwaive 708m / min. Nekutarisa pamamiriro ekumhanya, isu zvakare tinotora matekinoroji madhata uye tinopa mabasa ehunyanzvi anoenderana nezvinodiwa nevatengi
Kunze kweizvozvo, isu takaongororawo pamakamuri eparutivi etafura yetambo nhatu uye takasimbisa iyo ceramic mapepa uye zvivharo zvinoda kugadzirirwa. Kuti ikurumidze kuenda kumberi, mamwe mashoma maseti ehydrofoils ane maakona akasiyana akasimbiswa.
Pamwe chete nekushanya kune chigayo chemapepa, takaenda ku34th Federation yeASEAN Pulp uye Pepa Maindasitiri (FAPPI) Musangano wakaitirwa muDa Nang. Nyanzvi dzinoverengeka, vatungamiriri uye vanamuzvinabhizimusi mukugadzira mapepa maindasitiri akaunganidzwa kubva padyo nepari kure Isu takange takapihwa yakanakisa mamaki pane kuvandudza uye tarisiro yemapepa ekugadzira indasitiri pasirese. Kumabvazuva kweAsia, kuchine chirevo chekuwedzera uye chakasimba. Idzi inhau huru kwatiri pasi pehupfumi hwakanaka huri kubudirira. Mushure memusangano uyu, takasangana nevatengi vakasiyana tikachinjana vavariro pamubatanidzwa unogona.
Mukuenderera mberi, SICER ichaenderera nekuvandudza nekuvandudza zvigadzirwa. Ticharatidzawo kukosha kweChinese kugadzira ine yakatanhamara mienzaniso yekumba uye mhiri kwemakungwa, saka ramba wakatarisana!